सडक शैली, सडक फैशन: ब्याकप्याक्स | स्टाइलिश पुरुषहरू
सडक फैशन - ब्याकप्याकको पछाडि
मलाई याद छ कि स्कूल जाने बारे मलाई सबैभन्दा मनपर्ने चीजहरू मध्ये एक थियो जब यो मेरो प्रीमियरको पालो थियो ब्याकप्याक। स्कूल चरणमा एक अपरिहार्य पूरक जुन कि बर्षौंको लागि, धेरैको लागि एक फेसनबल टुक्रा भएको छ fashionistas.
आज, हाम्रो सेक्सनमा सडक फैशन, हामी तपाईंलाई छविहरूको चयन प्रस्ताव गर्दछौं जुनमा ब्याकप्याक्स पूर्ण पात्रहरू हुन्। सबैभन्दा बढि avant-garde बाट सबै sober डिजाइनहरु। यो स्पष्ट छ कि backpacking जुनून रहन को लागी यहाँ छ।
ब्याकप्याक्सको क्षेत्रको सब भन्दा प्रतिनिधि प्रवृत्ति भनेको एक हो कि ती मध्ये छालाले बनेको दुबै छाला र साबरमा, यस प्रस्तावलाई खोल्ने छविको रूपमा मौलिक रूपमा केही प्रस्तावहरू; नेभी निलो छालामा फेन्डीको घरबाट एक ब्याकप्याक जुन हास्यास्पद पुतलीको आकारमा राम्रो मिल्दो ट्रिंकेटको लागि बाहिर खडा हुन्छ। यस प्रकारका अधिक शान्त र colors्गका साथै हामीले धेरै साहसी रंगहरूमा प्रस्तावहरू पनि देख्यौं सुन्तला जस्तो रंगहरूमा ब्याकप्याक्स। कुनै श doubt्का बिना, यो शरद -तु-जाडो को एक स्टार टोन। दुबै सादा मोडलहरूमा र स्ट्राइकि pr प्रिन्टहरूको साथ, सबै स्वादहरूको लागि ब्याकप्याकहरू छन्। एउटा छाप्छ त्यो सडकमा सबैभन्दा दोहोर्याइएको छ camouflage प्रिन्ट, अर्को चलन जुन विस्मरणको केही वर्ष पछि फर्कन्छ।
यद्यपि यदि हामीले ब्याकप्याक्समा विशेष ब्रान्ड हाईलाइट गर्नुपर्‍यो भने, कुनै श doubt्का बिना, हामीले कुरा गर्नुपर्नेछ Sandqvist, ला स्वीडिश ब्याकप्याक ब्रान्ड त्यो यसको विशेषताहरु संग दुनिया भर मा सफल छ क्यानभास ब्याकप्याक्स। ब्याकप्याक्स जसले पोर्टलको विनाश गर्दछ सडक शैली र त्यो भन्दा पनि ठूला फेशन चेनहरूद्वारा विज्ञापन नक्कल प्रतिलिपि गरिएको छ द्रुत फैशन.
छविहरू - पौसेमाग, स्थानीयहरू, पुरुषहरू यस शहरमा, गार्कनजोन, कुना स्ट्रीट शैलीमा, शहरी Gent.
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » फेसन » सडक फैशन - ब्याकप्याकको पछाडि